Foto ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ na-egosi mmetụta okpomoku zuru ụwa ọnụ na Arctic | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Timo Lieber
El Arctic Ọ bụ otu n'ime mpaghara ụwa ka na-ata ahụhụ kachasị na nsonaazụ nke okpomoku ụwa. Otu ihe atụ bụ ọnwụ nke akpụrụ akpụ emepụtara n'oge na-adịbeghị anya n'ihi mmụba nke okpomọkụ: Na Greenland naanị, 3000 gigatons nke ice furu efu na 2016.
Ugbu a, onye Britain na-ese foto bụ Timo Lieber, ọkachamara n’ise ihe onyonyo, na-ewetara anyị nso n’eziokwu a jọgburu onwe ya.
Ihe onyonyo a, nke n’eme ka anyi chetara anyi anya mmadu, bu ihe n’egosi na odi ihe ndi anyi n’emezibeghi. Ọnọdụ okpomọkụ dị na Arctic dị ogo 2 karịa nke nkịtị, nke nwere ike ọ gaghị adị ka ihe dị ukwuu, mana ọ bụ karịa karịa ka ice gafere site na ịmalite ikpo okwu ọcha siri ike, na-agbaze n'ime mgbawa.
Maka Lieber, nke a bụ onyonyo kachasị amasị ya, n'ihi na ọ dị ka "anya" a na-ele anyị anya na-eche ihe anyị na-eme.
Nke a bụ ihe na - eme ka mpempe akwụkwọ ice na - ebelata: a na-akpụ obere chunks na-ejedebe, ọ gwụla ma ọnọdụ gbanwere, na-agbaze, nke na-eme ka ọkwa mmiri dị gburugburu ụwa na-ebute idei mmiri n'ụsọ oké osimiri na agwaetiti ndị dị ala.
Ọ bụ ezie na ọdọ mmiri ndị ahụ dị egwu, eziokwu ahụ bụ na ha malitere ịdị na Arctic metụtara, ọ bụghị naanị anyị bụ ụmụ mmadụ, kamakwa maka anụmanụ ndị bi ebe ahụ, dị ka anụ ọhịa bea. Anụmanụ ndị a, mgbe ha si na ụra pụta, ọ dị ha mkpa inwe ike ịga ije n’elu elu siri ike iji chụta anụ oriri ha.
Ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-akawanye njọ, pola bea nwere ọtụtụ nsogbu na-achọta na ịchụ nta nri ha.
Ihe onyonyo a, nke akpachapụrụ anya, kwesịrị iji tụgharịa uche na ihe na-eme na Arctic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Foto ndị na-awụ akpata oyi n’ahụ́ na-egosi etu okpomoku zuru ụwa ọnụ siri emetụta Arctic